Boqortooyada Sucuudiga oo loo haysto geerida weriye kale oo Dowladda dhaliili jirey (Hadda dhow oo la soo daayey) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Boqortooyada Sucuudiga oo loo haysto geerida weriye kale oo Dowladda dhaliili jirey...
Boqortooyada Sucuudiga oo loo haysto geerida weriye kale oo Dowladda dhaliili jirey (Hadda dhow oo la soo daayey)
(Riyaad) 20 Luulyo 2020 – Kooxaha xuquuqul insaanka Sucuudiga ee ALQST, ayaa ku baaqay in baaris lagu sameeyo xogta sheegaysa geerida weriye Sucuudi ah oo la yiraahdo, Saleh al-Shehi, kaasoo bishii Maajo lasii daayey kaddib 2 sanadood oo uu xirnaa.
War Axaddii kasoo baxay kooxda Sucuudiga ah ee Prisoners of Conscience ayaa sheegay in Shehi uu geeriyoodey kaddib markii ay “si daran u xumaatay xaaladdiisa caafimaad” tan iyo sii dayntiisii, iyadoo aanay jirin cid xog ka haysey xaaladdiisa caafimaad.
Shehi oo bog ku lahaa warqaadka al-Watan ayaa si joogto ah u dhaleecayn jirey Dowladda Sucuudiga, taasoo uu ku eedayn jirey musuq iyo inay si liidata oo insaaniyad ka foowq ah ula dhaqmi jireen dadka ajnabiga ah ee dalkaa ka xoogsada.
Ninkan ayaa bishii Febraayo 2018 lagu xukumay xabsi 5 sanadood ahaa, isagoo lagu eedeeyey inuu u “gefey maxkamadda boqortooyada, uu duray qiyamka saraakiisha isla markaana uu adeeci waayey madaxda” kaddib markii uu ka hadlay musuq dalkaa hareeyey.
Marka la eego qiimaynta xorriyadda hadalka iyo saxaafadda ee 2020 World Press Freedom Index, Saudi Arabia waxay ku jirtaa kaalinta 170 marka la qiimeeyo 180 dal oo dunida ah, taasoo ka dhigan inay 10 dal oo qur ihi ka liitaan.
Waxaa boqortooyada KSA, gaar ahaan MBS ayaa horay loogu haystey dilkii Jamaal Khashuuqji iyo qaar kale oo xir xiran.
Previous articleGOOGOOSKA: Juventus vs SS Lazio 2-1 (Bianconeri oo baxsatay)
Next articleMaxay sawirradani nooga sheegayaan xaaladda madaxdan marka la eego Cilmu-nafsiga?!! (Arag sawirrada & waxa ay noo sheegayaan)
(Washington, DC) 03 dIS 2020 - Maalmo uun kaddib markii uu MW Trump, u cafiyey si muran dhalisay, wuxuu la taliyihii hore ee Amaanka...